Bibliographic विवरण - यो bibliographical कागजात बारे जानकारी, कागजात भाग वा धेरै कागजातहरू अनुसार यस स्थापित नियम वा स्तर संग तयार गरिएको छ को सेट समावेश जानकारी छ। कागजात यसको मुख्य विशेषताहरु संकेत, आफ्नो विशेषताहरु एक प्रकारको जस्ता वर्णन द्वारा पहिचान गर्न सकिन्छ।
बिब्लियोग्राफी - bibliographical जानकारी प्रयोग र dissemination लागि तयार, आयोजन मा लगी भएको छ जो जानकारी को लागि गतिविधिको एक क्षेत्र। ग्रीक भाषाबाट अनुवाद छ एक मिश्रित शब्द अर्थ "एउटा किताब लेख्न।"
मुख्य कार्य स्थापित स्तर अनुसार सन्दर्भिकाहरुलाई bibliographical गतिविधि संगठित छ। त्यसैले, एक कागजातको bibliographic विवरण बनाउन, तपाईं अनुसार GOST 7.1-2003 संग सेट स्तर पालन गर्न आवश्यक छ।
अर्को गतिविधि विभिन्न एक बिब्लियोग्राफी सङ्कलन गर्न छ कागजातहरू, को वर्गीकरण आफ्नो सूची, साथै दृष्टान्त सन्दर्भिकाहरुलाई को संग्रह।
को bibliographic विवरण को घटक
Bibliographic विवरण - यो bibliographic रेकर्ड अभिन्न भाग हो। यस्तो विवरण फरक गणितीय र द्वारा प्रत्येक अन्य अलग हेडर र क्षेत्रहरु बनेको छ विराम चिह्न। उदाहरणका लागि, पेट वा ड्यास लागि। क्षेत्र तत्व विभाजन गरिएको छ।
विवरण कटौती बिना लेखिएको छ जो कागजातको लेखक, साथै मुख्य शीर्षक, शीर्षक नाम को धेरै सुरुमा समावेश गर्दछ। थप कागजात प्रकार निर्दिष्ट गर्दछ। एक ट्युटोरियल - उदाहरणका लागि, यो पेट कि यो कागजात अगाडि राख्दै द्वारा निर्दिष्ट गरिएको छ। अर्को, डाटा क्षेत्रहरू फिट। को bibliographic विवरण समावेश क्षेत्र प्रकारको वर्णन आधारमा फरक हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, क्षेत्र मा कागजात जारी बारे जानकारी, अर्को क्षेत्रमा निर्दिष्ट पृष्ठ को संख्या समावेश हुन सक्छ। मा कोष्ठकमा, र बिना कटौती निर्दिष्ट श्रृंखला, र त्यसपछि - को परिसंचरण र अन्तर्राष्ट्रिय नम्बर ISBN। सानो अक्षर लेखिएको छ कि माथि क्षेत्र बनाउन तत्व।
bibliographic वर्णन को प्रकार
एकल-स्तर, बहु-स्तर, विश्लेषणात्मक: 2003 को GOST अनुसार, एक bibliographic विवरण यस्तो प्रकार हुन सक्छ। यस्तो वर्णन को एक विशेष प्रकारको bibliographical सन्दर्भहरू छन्। विवरण ठूलो विस्तार गरे र सबै सम्भव तत्व हुन्छन् छ भने, यो पूर्ण हुन भने। को बिब्लियोग्राफी एक विस्तारित विवरण सक्छन् पनि अनिवार्य तर पनि वैकल्पिक तत्व मात्र समावेश गर्नुहोस्। साथै, तपाईंले बनाउन सक्नुहुन्छ र मात्र तत्व मिलेर एक संक्षिप्त विवरण, अनिवार्य छन्। यी तत्व मुख्य शीर्षक र जानकारी प्राथमिक जिम्मेवारी समावेश गर्नुहोस्।
पुस्तक वा पर्चामा को Bibliographic विवरण
आधुनिक मानक क्षेत्रमा संयुक्त छन् अनिवार्य र वैकल्पिक तत्व मिलेर, संरचना जस्तै bibliographic विवरण पुस्तकहरू परिभाषित। क्षेत्र राज्य मानक द्वारा परिभाषित एक पारंपरिक द्वारा विभाजित विराम र गणितीय प्रतीक। पुस्तकको मुख्य शीर्षक साथै सूचीकृत गर्नुपर्छ , शीर्षक पृष्ठ यसको आकार र कटौती बङ्ग्याउन बिना।
पुस्तकको bibliographic विवरण एक अपरिहार्य तत्व हो: शीर्षक, पुस्तकको शीर्षक, प्रकाशन को ठाउँ। शीर्षक अन्य तत्व व्याख्या र शीर्षक प्रकट र पुस्तक विधा, उद्देश्य र अन्य विशेषताहरु को प्रकारको स्पष्ट गर्नुपर्छ। अर्को एक स्ल्यास द्वारा अलग क्षेत्र छ। जिम्मेवारी बारे जानकारी राखिएको प्रकाशक र प्रकाशनको लागि पुस्तक तयार गर्ने बारेमा जानकारी। यो जानकारी सम्पादक, compilers, व्याख्याकारों र अरूको नाम समावेश छ।
Extracurricular गतिविधिहरु: यो के हो?
अंकगणित मतलब कसरी पाउन, र जहाँ यो दैनिक जीवनमा उपयोगी हुन सक्छ
प्रतिभाशाली अभिनेता, "सामान्य चिकित्सा" मान्छे आशा दिन्छ
यो बकसुआ गर्न diverges यदि कसरी, जिपर गर्न?
नेटवर्क-विस्तृत मानवता को समझ:3जी के छ
बल Bugatti नल। बिजुली ड्राइव संग क्रेन
जीव के हो? परिभाषा
कबूतर को एक ढुकुरले को उपस्थिति कसरी भेद गर्न?